The United Nations Security Council heldabriefing session regarding the situation in Myanmar – MINISTRY of FOREIGN AFFAIR
The United Nations Security Council heldabriefing session regarding the situation in Myanmar
The United Nations Security Council heldabriefing session regarding the situation in Myanmar at its Chamber in New York on 13 February 2018. At the session, H.E. U Hau Do Suan, Permanent Representative of the Republic of the Union of Myanmar to the United Nations deliveredaStatement on the Government’s efforts in addressing the current challenges in Rakhine State.
The Permanent Representative stressed that the current humanitarian crisis was the consequence of terrorist attacks against security posts and it could apparently be seen asathreat to the security, sovereignty and territorial integrity of Myanmar. He emphasized that it was notareligious issue as some people were trying to portray, and the majority of Muslims living in other parts across Myanmar had been living peacefully and in harmony with other people of different faiths throughout history.
Furthermore, the Permanent Representative highlighted that the challenges in Rakhine State had no easy quick fix and ultimately, it was up to the people of Myanmar to determine how to achieveapeaceful and prosperous Rakhine State. He said “Myanmar welcomes constructive cooperation from the international community. Myanmar should not become hostage of the one-sided media and activists in policy making process. Important Judgment and policy decision should be based on careful examination of the information”.
ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီသည် မြန်မာနိုင်ငံအခြေအနေနှင့်ပတ်သက်သည့် ရှင်းလင်း ပြောကြားပွဲတစ်ရပ်ကို ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၃ ရက်တွင် နယူးယောက်မြို့ ကောင်စီ၏ အစည်းအဝေးခန်းမ၌ ကျင်းပခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါရှင်းလင်းပွဲ၌ ကုလသမဂ္ဂ ဆိုင်ရာ မြန်မာအမြဲတမ်း ကိုယ်စားလှယ်၊ သံအမတ်ကြီး ဦးဟောက်ဒိုဆွမ်းက ရခိုင်ပြည်နယ်အရေးကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍ အစိုးရမှ ကြိုးပမ်း ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသော ကိစ္စရပ်များကို ရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။
အမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်က ပြောကြားရာတွင် လက်ရှိ လူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာ အခက်အခဲ ဖြစ်ပွားမှုမှာ လုံခြုံရေးစခန်းများကို အကြမ်းဖက်အဖွဲ့မှ တိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်း၏ နောက်ဆက်တွဲပြဿနာ ဖြစ်ကြောင်း၊ ယင်းမှာ မြန်မာနိုင်ငံ၏ လုံခြုံရေး၊ အချုပ်အခြာအာဏာနှင့် နယ်မြေတည်တံ့ခိုင်မြဲရေးတို့အတွက် ခြိမ်းခြောက်မှုတစ်ရပ် ဖြစ်သည်ကို ရှင်းလင်းစွာ တွေ့မြင်နိုင်ကြောင်း၊ အချို့က ပုံဖော် ပြောကြားနေ သကဲ့သို့ ဘာသာရေးပြဿနာတစ်ရပ် မဟုတ်ကြောင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံတစ်ဝန်း အခြားသော ဒေသများတွင် နေထိုင်ကြသည့် မူဆလင် အများစုမှာ အခြားဘာသာဝင်များနှင့်အတူ ငြိမ်းချမ်းစွာနှင့် သဟဇာတရှိစွာ သမိုင်းတစ်လျှောက် နေထိုင်ခဲ့ကြကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါ သည်။
ထို့ပြင် ရခိုင်ပြည်နယ်တွင် ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့နေရသည့် စိန်ခေါ်မှုများအတွက် အလွယ်တကူ ဖြေရှင်းနိုင်မည့်နည်းလမ်းမရှိကြောင်း၊ ပြဿနာကို ဖြေရှင်းရန်မှာ မြန်မာပြည်သူများအနေဖြင့် ငြိမ်းချမ်းပြီး သာယာဝပြောသော ရခိုင်ပြည်နယ်ကို မည်ကဲ့သို့ ဖော်ဆောင်မည် ဆိုသည့် ခံယူချက်အပေါ်တွင်သာ မူတည်ကြောင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံသည် နိုင်ငံတကာ အသိုင်းအဝိုင်း၏ အပြုသဘောဆောင်သော ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်မှုများကို ကြိုဆိုကြောင်း၊ မူဝါဒချမှတ်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွင် တစ်ဖက်သတ်ဆန်သော မီဒီယာများနှင့် လှုပ်ရှားသူများ၏ ဓားစာခံ မဖြစ်သင့်ကြောင်း၊ သတင်းအချက်အလက်များအပေါ် အသေအချာ ဆန်းစစ်ပြီးမှသာ အရေးကြီးသော စီရင်ဆုံးဖြတ်မှုနှင့် မူဝါဒ ဆိုင်ရာ ဆုံးဖြတ်ချက်များကို ချမှတ်သင့်ကြောင်း စသည်ဖြင့် ပြောကြားခဲ့ပါသည်။